“သူ့ ရင်ခွင်သည် ပန်းဆုအတွက် တမူထူးကာ နွေးထွေးလုံခြုံမှုတွေ ပေးစွမ်း နိုင်ရမည်။ ပန်းဆုချစ်သူ သည် ပန်းဆု ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ချိန်တွင် ပန်း ဆု နှင့် အတူ မျက်ရည် ကျကောင်း ကျနေခဲ့ နိုင်သော် လည်း သူ ကတော့ ပန်းဆု ခေါင်း ထားကာ ငိုကြွေးဖို့ ရင်ခွင် ကိုပေး မည်။ အရင်က ပန်းဆု ရယ်မော နေချိန် တွင် ပန်းဆု ချစ်သူက သူမ နှင့် အတူ လိုက်ပါ ရယ်မော ကောင်းရယ် မော ခဲ့မည်၊ သူ ကတော့ ပန်းဆု ထာဝရ ရယ်မော စေနိုင်မည့် ရင်ခွင်ကို ပေးအပ်မည်။”
ပန်းဆု ကတော့သူ့ ရင်ခွင်တွင် နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်လျက်ရှိသည်။ ပန်းဆုဆံစတွေက သူ့ ရင်ဘတ်ပေါ်၌ခွေလိပ်၍ ကျလို့ နေသည်။ ပန်းဆု၏ ကိုယ်သင်းရနံ့ နှင်အတူ ခေါင်းလျှော်ရည်နံ့ သင်းသင်းကို သူ ပင့်သက်ရှူလိုက်တိုင်း စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရရှိလို့ နေသည်။ သူ အသက်ရှူလို့မြင့်တုံနိမ့်တုံ လှုပ်ရှားနေသော သူ့ ရင်ခွင်ကြောင့်ပန်းဆု လန့် နိုးသွားမည်ကို စိုးရိမ်နေမိသည်။ သူ့ လက်အနည်းငယ်ကျဉ်နေသော်လည်း ပန်းဆုကို ဘေးသို့တွန်းဖယ် မပစ်ရက်ပေ။
သူ့ ရင်ခွင်တွင် အိပ်ပျော်နေသော ပန်းဆုမျက်နှာလေးကို သူကြည့်နေမိသည်။ ညသည် ခြောက်ကပ်စွာတိတ် ဆိတ်နေခဲ့ သည်။ ပန်းဆုဟူသော သူ့ ဇနီး အလှသာမရှိခဲ့ ရင် ဤသို့ သောညများသည် သူ့ အတွက် အဓိပ္ပါယ် မဲ့ နေမည်သာ။ ပန်းဆုသည် သူ့ ဘဝအတွက် သာယာစွာမြည်တတ်သော ဆည်းလည်း လေးတစ်ခု ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာခဲ့ သည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသော သူ့ ရင်သည် ပန်းဆုဟူသော ဆည်းလည်းလေ ကြောင့် သာ ယာစွာ စိုပြေလာခဲ့ သည်။
ပန်းဆု ကို မေမေ ပြသောဓါတ်ပုံထဲတွင်သာ တစ်ကြိမ်မြင်ဖူးခဲ့ သည်။ ပန်းဆုကလှသည်။ ဒီခေတ်အခါဝယ် အမေ ပေးစားသော မိန်းမနှင့် အချစ်မပါပဲ လက် ထပ်ထိမ်းများခြင်းသည် သူ့ အတွက် ယောက်ျားတစ်ယောက် ၏သိက္ခာ ကျစရာတော့ဖြစ်သည်။ သို့ သော် ထို့ အတွက် သူထွေပြားစွာ မတွေးခဲ့ ရ။ မေမေ့ သဘောလို့ သာ ပြောပြီး ပန်းဆုကိုသူလက်ခံခဲ့ သည်။ သို့ သော် သူ့ ရင်ထဲကနှစ်နှစ်ကာကာ ဖြင့်ပန်းဆု ကိုလက်ထပ်ခဲ့ ခြင်း သာ ဖြစ်သည်။
နွမ်းနယ်နေသော ပန်းတစ်ပွင့်သည် ကံအားလျော်စွာ သူ့ ရင်ပေါ်သို့ ဘုတ်ကနဲ့ ပြုတ်ကျလာသလို၊ ပန်းဆုသည် လည်း ကွဲကြေသောနှလုံးသာ ဖြင့်သူ့ ဘဝ ထဲသို့ ညင်သာစွာဝင်ရောက်လာခဲ့ သည်။ ငယ်ချစ်ဦး၏ ရင်ခွင်တွင် ဆယ်နှစ်တာမျှ ခိုးနားခဲ့ သောပန်းဆုသည် သူမ အလှတရားတွေကြားက မာနကို ဖယ်ခွာ လျက် သူ့ ရင်ခွင်သို့တွန့် ဆုတ်စွာ ရောက်လာခဲ့ ခြင်းသာဖြစ်သည်။
ပန်းဆု ချစ်သူကို တမ်းတ လွမ်းမောနေချိန်တွင် ကြင်နာစွာနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးမည်။ မနာလို မုန်းထားသော အငြိုးတရား တွေကို သူ့ ရင်ခွင်၌ ပန်းဆုမ မြင်စေရ။ ပန်းဆု ပျော်နိုင်ရေးအတွက် သူ့ အချစ်ဖြင့် သူ့ ရင်ခွင်ကို သူ မွမ်းမံခဲ့ သည်။ သူပန်းဆုကို လက်ထပ်ချိန်တွင် သူ့ အပြုံးတွေဖြင့် ပန်းဆုကိုပြုံးကူခဲ့ သည်။ ပန်းဆုသည် သူ့ ရင် ခွင်အဝင်ဝတွင် မရွှင်မြူးနိုင်သော်မှ ဝမ်းမနည်းစေရ။ သူ သည် ပန်းဆုကို လက်ထပ်သောနေ့ တွင် ပန်းဆုအတွက် ရင်ခွင်တစ်ခုကို ကောင်းစွာဖန်တီးခဲ့ လေပြီ။
သီချင်းဆို ဂစ်တာတီးကောင်းသော ပန်းဆု ချစ်သူလို သူ မတီးမဆိုတတ်ပေမယ့် ပန်းဆု သီးချင်းနားထောင် ချိန်တွင် သူဆိတ်ဆိတ်နေလျက် ပန်းဆုကို သီချင်းတွေ နားထောင်စေခဲ့သည်။ ပန်းဆု လက်မောင်းကို အသာ ပုတ်လျက် စည်းဝါးလိုက်ပေးခဲ့သည်။ သူက အိမ်မှာနေလျက် ပန်းဆု နှင့်အတူ ဒရာမာ ဇာတ်ကား ကောင်းကောင်း တစ်ခု ကြည့်ချင်ချိန်တွင် ပန်းဆုကြည့်ချင်သော ဟာသရုပ်ရှင်ကြည့်လျက် ပန်းဆု၏ ရယ်မောဖော် ဖြစ်ခဲ့သည်။
နံနက်ခင်းလင်းချိန်တွင် သူ့ ရင်ခွင်၌ နိုးထလာသော မိန်းကလေးသည် တပါးသောရင်ခွင် အမှတ်ဖြင့် ကြည်နူး နေချိန်တွင် အိပ်ဟန်ပြုကာ သူ လျစ်လျူရှုခဲ့ သည်။ တိတ်ဆိတ်သောညရံ တွင် အိပ်မက်ဆိုးမှ ချစ်သူဟောင်း အမည်ခေါ်လျက် လန့် နိုးလာသော ပန်းဆု၏ လှိုက်ဖိုသော ရင်ကို အေးမြသောရေ နဲ့ အတူ နားလည်ပြုံးဖြင့် အေးမြစေခဲ့ သည်။
ပန်းဆု သူ့ ကို ခေါင်းလျော်ပေးတဲ့ အခါများတွင် ပန်းဆု ချစ်သူဟောင်းကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေမှန်း သိလျက်သူ ငြိမ်သက်စွာ နေပေးခဲ့သည်။ ချစ်သူ့ ဓါတ်ပုံ ကို လွမ်းတသသ နဲ့ ပန်းဆုကြည့်နေချိန် သူရောက်သွား၍ သူ့ အမြင်မှ အိနြေ္ဒပျက်စွာ ဖုံးကွယ်ခဲ့ တဲ့ အခါ ပန်းဆု ဆံစတွေကို နမ်းရှိုက်လျက် မသိဟန်ပြု နေ ခဲ့သည်။ သူ့ အချစ် အိမ်သည် ပန်းဆု အတွက်လုံခြုံမှုတွေ အပြင် သာယာမှုတွေကိုပါပေးနိုင်ခဲ့ သည်။
သူ့ တွင် မာနတွေ မရှိလို့ လား။ ရှိတာပေါ့ သူ့ လောက်မာနကြီးတဲ့ သူ မရှိဟုတောင် သူထင်ခဲ့သည်။ မိန်းမတစ် ယောက်တစ်အတွက် သူ့ မာနတွေ မကျ ဆုံးစေရလို့ တောင် အသံကောင်းဟစ်ခဲ့ သေးသည်ပဲ။ ပန်းဆု ဟူသော မိန်းကလေး ကိုစတွေ့ လိုက်ရသော နေ့ တွင် သူ့ မာနတွေသည် ပိန်းကြာဖက်၌ ရေမတင်ဘိသကဲ့ သို့ ကျဆင်း ပျောက်ကွယ်လျက် အချစ်ဟူသော ခွန်းအားကိုသာဖြစ်စေခဲ့ သည်။
ပန်းဆု သက်ပြင်းကို အသာအယာချလိုက်ကတည်းက သူ ဖျတ်ကနဲ့ နိုးနေလေပြီ။ သို့ သော် ပန်းဆုကို သူ့ ရင် ခွင်မှ ဖယ်ရှားလျက် ဤအိပ်ယာထက်မှ ထ လိုက်ရမည်ကို သူအနည်းငယ်စိုးရွံ့ နေသေးသဖြင့် ပန်းဆုကိုဆက် လက် ထွေးပွေ့ ရင်း အသာမိန်းမောနေလိုက်သည်။ ရုတ်တရက် ပန်းဆုက သူ့ မေးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်သဖြင့် သူ အံ့အားသင့်သွားမိသည်။
ပန်းဆု မျက်ဝန်းတွေက ရှက်ရွံ့ စွာ တောက်ပနေခဲ့ သည်။ မို့ အစ်အစ်ကလေးဖြစ်နေသော ပန်းဆုမျက် နှာလေး သူ့ ရင်ခွင်ထဲသို့တိုးဝှေ့ ပျောက်ကွယ်သွား ပုံမှာ အလွန်တရာ မြတ်နိုးစာရာ ကောင်းနေလေသည်။ နေခြည့်ဖြာ ကျနေသော သူ နဲ့ ပန်းဆုတို့ ၏ အိပ်ခန်းလေးတွင်းသို့ လေပြေက သုတ်ကနဲ တိုက်ခတ် လာသည်။ သူ့ ဥယျာဉ် ကြီးသည် ယနေ့ တွင် စတင်၍ ဖူးပွင့်ခဲ့ လေပြီ။
သူ ကျေနပ်စွာ ပြုံးမိသည်။ ပန်းဆုကိုလည်း ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ဖက်တွယ်လိုက်မိသည်။ ပန်းဆုသည် သူ့ အတွက် အမှန်ပင် ဆုလာဒ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ လေပြီ။ သူ့ ရင်ထဲက အချစ်တွေ ဖြင့် ကြီးပွားနေသော ပန်းဆု အတွက်ဖန် တီး ပေးခဲ့ သော သူ့ ရင်ခွင်သည် ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ တိုင်ခဲ့ လေပြီ။ သူ ပန်းဆု၏ ရှင်းသန့် ဖြူစင်သော နဖူးပြင် ကို နှစ်နှစ်ကာကာဖြင့် နမ်းရှိုက်လိုက်မိပါသည်။ သူ့ အချစ်အိမ်လေးသည် ချစ်သူနှစ်ဦး၏ ရယ်သံလွင်လွင်များ ဖြင့်……………………….
ဦးဝါ စည်းထားတာ အဝါ ရောင် necktie မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ် သူက ပြောတာကိုး အရောင်မတူတဲ့necktie စည်းထားတယ်ဆိုတာ။အိုကေ နောက် သူ အစိမ်းရောင် necktie လည်းစီးမထား ဘူး ဆိုတာသေချာတယ် ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူပြေတာကို အစိမ်းရောင် necktie စည်းထားတဲ့ လူက ထောက် ခံတယ်လို့ ပြောထားပါတယ် ….. ဒါကြောင့် ဦးဝါက အညိုရောင် necktie စည်းပါတယ်၊ ဦးစိမ်းရ အဝါရောင် necktie စည်းပါတယ် နောက်ဆုံး ဦး ညိုက အစိမ်းရောင် necktie စည်းထားပါတယ် …… လွယ်လွယ်လေးပါ နော် …. ဒါတောင် အင်တာနက် မှာ မနည်းရှာယူရတယ် ဟီးဟီး .....ကိုမေးတဲ့ ပဟေဠိ ကိုယ် မဖြေနိုင်ဖြစ်နေ မစိုးလို့……
Posted by yangonthar at 1:24 AM
wow! ရေလည်မိုက်တယ်...ဒါပေမဲ့..ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားတော့ တွေးမိပါတယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်ဆိုတာ နားလည်မူတွေ နဲ့ တည်ဆောက်ထားခြင်းပါပဲ..